Taariikh Nololeedka Boqorada Kowaad Ee Bollywood-ka Madhuri Dixit Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro) – Filimside.net
Taariikh Nololeedka Boqorada Kowaad Ee Bollywood-ka Madhuri Dixit Min Bilaaw Ilaa Dhamaad (+Sawiro)
May 15, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: May 15, 2018
Madhuri Dixit waa atirisho ka tirsan Bollywood-ka waxayna dhalatay 15 May sanadii 1967 haatana waa 51-jir sidoo kalena todobaadkan ayay u dabaal dageysaa sanad guuradeeda qaaska u ah.
Madhuri Dixit waxay kamid aahayd atirishooyinka Bollywood-ka hogaankau hayeen bartamihii 80-kii, 90-kii iyo bilawgii 2000 si qaas ah 90-kii ayadaa ugu awood badneyd dhanka atirishooyinka waxayna fanka ka gaartay heerkii ugu sareeyay.
Madhuri Dixit waa atirisho xirfadeeda aad u sareyso sidoo kale Dance-ga iyo filimada door walbo ku sameyn karto madaama ay fanka mudo dheer kusoo jirtay.
Madhuri Dixit waxay ku guuleesatay 6-jeer abaal marinta Filimfare Award weliba 4-ka mid ah atirishada ugu wanaagsan ayay qaadatay.
Xidigtaan waa atirishada ugu badan ee u tartanto abaal marinta Filmfare Awards mudo 14-jeer oo kala duwan.
Haka reebin in Madhuri Dixit abaal marinta Padma Shri ee ah darajo ahaan bilada ugu sareyso ee la siiyo muwaadinka Hindiga ee dalkiisa wax wanaagsan u qabtay.
Madhuri Dixit sanadii 1984 ayay Bollywood-ka kusoo biirtay waxayna sameesay filimkii Abodh laakiin aqoonsi caalami ah waxay ku heshay filimkii Classic ahaa Tezaab oo ah sanadii 1988 Anil Kapoor la sameesay.
Wixii markaas ka dambeeyay waxay noqotay atirisho awood badan oo sameesay aflaan badan oo hirgaleen ganacsi ahaan iyo sheeko ahaan waxaana ka mid ah Ram Lakhan (1989), Parinda (1989), Dil (1990), Saajan (1991), Beta (1992), Khalnayak (1993), Hum Aapke Hain Koun..! (1994), Raja (1995), Dil To Pagal Hai (1997), Anjaam (1994), Mrityudand (1997), Pukar (2000), Lajja (2001) iyo Devdas (2002).
Waxaa xusid mudan in sanadii 2002 ay Bollywood-ka isaga fariisatay si ay caruurteeda waqtigeeda oo dhan siiseyso waxayna dib usoo laabatay sanadii 2007 ayadoo la timid Aaja Nachle.
Sidoo kalena dhawaanahan waxay Madhuri sameeyay filimo kale oo sheeko ahaan laga helay sida Dedh Ishqiya iyo Gulaab Gang.
Marka laga soo tago hawlaha filimada Madhuri waxay caan ku tahay dhex dhexaadinta barnaamijyada Dance-ga ee TV-yada ka baxaan ee dhanka Dace-ga ah sida Jhalak Dikhhla Jaa iyo kuwo kale.
Madhuri Dixit Iyo Bilawgii Nolosheedii:
Dixit waa reer Mumbai waxayna kasoo jeedaa gobolka weyn Maharashtra, xidigtaan aabaheed waa Shankar Dixit halka hooyadeed lagu magacaabo Snehlata Dixit.
Dixit waxay wax kusoo baratay Divine Child High School sidoo kalena Mumbai University ayay ka baratay taqasuska microbiologist.
Waxaa xusid mudan in Madhuri ayadoo 3-sano jirtay ay bilaawday jeceylka ay u qabto Dance-ga wixii markaas ka dambeeyay Dance-ga ayay qabatintay taasi oo sababtay inay xirfad gaar ah ku yeelatay Dance-ga.
Madhuri Dixit Iyo Bilawgii Waayaheeda Fana Iyo Hoos U Dhicii Ay Ku Af Bilaaday 1984 – 1988:
Dixit filimkeedii ugu horeeyay Abodh waxaa iska laheyd shirkada muga weyn Rajshri Productions waxaana la jilay atooraha reer Bengal ee lagu magacaabo Tapas Pau.
Filimkii Abodh wuxuu soo baxay sanadii 1984 ganacsi ahaan wuu guul dareestay balse Madhuri qaab jiliinkeeda wanaagsan ayaa la isla arkay waxayna ku heshay filimkaan amaan balaaran.
Filimkeedii xigay Madhuri waxay la timid sanadii 1985 wuxuuna ahaa Awara Baap waana filimka kaliya oo ay sanadkaas sameesay.
Filimka Awara Baap waxaa kasoo muuqdeen xidigo badan oo caan ah sida Rajesh Khann, Meenakshi Seshadri iyo kuwo kale laakiin nasiib daro waa filim guul dareestay wuxuuna noqday filimkii labaad ee Madhuri Flop ka noqdo.
Madhuri culeeska ayaa kusii batay madaama labadii filim oo ay la timid sanadii 1986 Swati iyo Manav Hatya ay wada guul dareesteen.
Filimka Swati xidigo badan ayaa kasoo wada muuqdeen sida Meenakshi Sheshadri, Shashi Kapoor, Sharmila Tagore, Madhuri Dixit, Vinod Mehra, Akbar Khan iyo Sarika laakiin ganacsi ahaan wuu guul dareestay.
Sidoo kalena filimka kale Manav Hatya oo ay Madhuri la jileen xidigaha kala ah Shekhar Suman, Sunil Thapa, Gulshan Grover, Sharat Saxena, isagana daadka ayaa qaaday.
Madhuri Dixit waxba iskama badalin nasiib xumadeedii madaama sedexdii filim oo ay la timid sanadii 1987 Mohre, Hifazat iyo Uttar Dakshin dhamaantooda ay guul dareesteen!
Filimka Mohre Madhuri waxaa la jilay Nana Patekar halka filimka Hifazat ay Madhuri la sameeyaan Anil Kapoor iyo Ashok Kumar sidoo kalena filimkeeda kale Uttar Dakshin waxaa la jileen Jackie Shroff iyo Rajinikanth.
Sanadii 1988 Madhuri Dixit labadeedii filim ee ugu horeeyay Dayavan and Khatron Ke Khiladi iyagana Flop ayay noqdeen taasi oo ka dhigneyd in xidigtaan in 9-filim ee ugu horeeyay ganacsi ahaan guul dareesteen!
Madhuri Markii Ay Guusha Saaxiib La Noqotay Iyo Aqoonsigii Caalamiga Ahaa Oo Ay Heshay (1988 – 89)
Dixit ugu dambeyntii aqoonsigii ay u baahneyd waxay ku heshay filimkii jeceylka ahaa Tezaab ee uu iska lahaa N. Chandra waxaana la jilay Anil Kapoor.
Tezaab wuxuu noqday Blockbuster sidoo kalena wuxuu noqday filimkii ugu weynaa sanadii 1988 weliba Madhuri maqaamkii ay u baahneyd ayay si wacan ku gaartay.
Sidoo kalena Madhuri wuxuu filimka Tezaab ka caawiyay markii ugu horeesay inay u tartanto atirishada ugu wanaagsan oo ay shirkada Filmfare Awards bixiso sanadii 1988.
Madhuri iyo Anil Kapoor waxay noqdeen labada loogu jecel yahay inay filim isla sameeyaan dhamaadkii 80-kii sidaa darteed sanadii 1989 waxay la imaadeen filimkii Blockbuster-ka weyn noqday Ram Lakhan ee ilaa haatan ah filim Classic ah oo sheekadiisa Hindiya hadal hayaan.
Madhuri filimkeedii xigay sanadii 1989 wuxuu ahaa Prem Pratigyaa oo ay la sameesay Mithun Chakraborty inkastoo filimkan ganacsi ahaan guul dareestay balse sheekadiisa iyo qaab jiliinka Madhuri ayaa siweyn loo amaanay.
Madhuri Dixit sanadii 1989 ma hilmaami karto waxay la timid Blockbuster-keedii labaad oo ahaa Tridev oo ay la sameesay Sunny Deol, Jackie Shroff iyo Naseeruddin Shah.
Sidoo kalena Dixit doorkii yaraa oo ay ku yeelatay filimkii Parinda oo ay Anil Kapoor iyo Jackie Shroff la sameesay siweyn ayaa loo amaanay sanadii 1989.
Madhuri Dixit Markii Ay Super Star-da Bollywood-ka Noqotay Awoodeedana Loo Dhawaan Waayay 1990 – 2002:
Sanadii 1990 Madhuri waxay la timid filimkii Blockbuster-ka weyn noqday sidoo kalena jeceylka Classic ah Dil oo ay isla jileen Aamir Khan.
Madhuro filimkan waxay kula wareegtay hogaanka Bollywood-ka madaama ay ku qaadatay atirishada ugu fiican oo ay shirkada Filmfare Awards bixiso.
Madhuri sidoo kale sanadii 1990 filimkii Hit-ka weyn noqday Kishen Kanhaiya ayay Anil Kapoor la sameesay midaas oo ka caawisay inay awoodeeda Boxoffice-ka sii laba jibaarto.
Xidigtaan Hit-keedii sedexaad oo ay sanadii 1990 la imaaday wuxuu aha filimka Thanedaar oo ay Sanjay Dutt la sameeyay sidoo kalena filimkan guul weyn ayuu gaaray.
Madhuri Dixit oo awoodeeda Bollywood-ka cirka gashay sidoo kalena dhamaan baska gadaale ku reebtay Sridevi iyo atirishooyinkii ku waqtiga ahaa ayaa sanadii 1991 la timid filimkii Super Hit-ka weyn noqday Saajan oo ay Sanjay Dutt iyo Salman Khan la sameesay.
Dixit iyo Anil Kapoor ayaa sanadii 1992 Bollywood-ka awood ku qabsadeen madaama filimkoodii Beta uu Blockbuster noqday sidoo kalena filimkii ugu weynaa ee sanadii 1992 la daawado.
Madhuri qaab jiliimkii wacnaa oo ay Beta ka muujisay ayaa u suura galiyay inay markeedii labaad ku guuleesato atirishada ugu wanaagsan Bollywood-ka oo ay shirkada Filmfare Awards bixiso.
Waa qasab in Dixit sanad walbo filim Hit dhameestiranl la imaado sidaa darteed sanadii 1993 waxay door muhiim ah ka qaadatay filimkii weynaa Khalnayak ee Super Hit-ka weyn noqday waxayna Madhuri filimkaan la sameesay Sanjay Dutt iyo Jackie Shroff.
Xidigtaan laga daba haray si rasmi ah ayay u noqotay Super Star-da Bollywood-ka ee aan laga daba murmi karin kadib markii filimkeedii Hum Aapke Hain Koun..! uu noqday All Time Blockbuster sidoo kalena iskooro taariikhi ah uu filimkaan dhigay waxaana Madhuri filimkaan la sameeyay Salman Khan.
Madhuri wuxuu filimka Hum Aapke Hain Koun..! ka caawiyay inay markeedii 3-aad ku guuleesato atirishada ugu wanaagsan oo ay shirkada Filmfare Awards bixiso.
Filimka Hum Aapke Hain Koun..! wuxuu jebiyay iskoorka dhanka lacagaha ee filimka Sholay (1975) u yiilay waxayna Bollywood-ka ku qaadatay mudo 7-sano inay iskoorka lacagaha Hum Aapke Hain Koun..! jebiyaan waxaana iskoorka lacagaha kala wareegay filimka Gadar: Ek Prem Katha sanadii 2001.
Sidoo kale Madhuri sanadii 1994 filimkeedii kale Anjaam oo ay SRK la sameeyay uu guul dhex dhexaad ah gaaray sidoo kalena atirishada ugu wanaagsan ayay ugu tartantay doorkeeda.
Madhuri Dixit oo taageerayaasheeda jeceyl waali ah u qabaan sanadii 1995 waxay la timid filimkii Raja ee Sanjay Kapoor lagu soo caan bixinaayay.
Raja wuxuu noqday Blockbuster sidoo kalena wuxuu noqday filimka 4-aad ee lacagaha ugu badan Bollywood-ka kasoo xareeyay sanadii 1995 waxaana sabab u ahayd guusha uu filimkaan gaaray Madhuri oo markaas muuqeeda in la arko lacag ahayd!
Madhuri Dixit filimadeedii xigay oo ay sameesay ganacsi ahaan dhulka ayay galeen badankooda kuwaas oo kala ahaa Yaaraana (1995), Paappi Devataa (1995), Prem Granth (1996), Rajkumar (1996), Mahaanta (1997), Mrityudand (1997) iyo Mohabbat (1997).
Madhuri oo xaalka ku xun yahay waxaa kusii batay culeeska madaama filimkii Koyla oo ay ku qaadatay sameyntiisa lacagihii ugu badnaa ee ebid atirisho filim lagu siiyo oo ahayd xiligaas 50-Lakh uu filimkan guul weyn gaari waayay.
Koyla oo ay Madhuri iyo SRK isla jileen wuxu noqday filim Average ah oo kaliya dib usoo celiyay lacagihii lagu qarash gareeyay oo kaliya.
Dixit culees walbo oo soo wajahay waxay ku hilmaantay filimkii Dil To Pagal Hai oo ay SRK isla jileen waxaana filimkan iska lahaa Director Yash Chopra.
Dil To Pagal Hai Blockbuster weyn ayuu noqday sidoo kalena filimkii labaad ee sanadii 1997 ugu weynaa ayuu noqday.
Dil To Pagal Hai wuxuu ka caawiyay in Madhuri Dixit ay markii 4-aad ku guuleesato abaal marinta Filmfare Awards qaybta atirishada ugu wanaagsan.
Madhuri sanadii 1998 filimkii ay Nana Patekar la sameeyay Wajood wuxuu noqday mid guul dareestay sidoo kalena filimkii Aarzoo ay Akshay Kumar iyo Saif Ali Khan la sameeyay isagana dhulka ayuu galay.
Dixit sanadii 2000 waxay la timid filimkii Pukar oo ay Anil Kapoor la sameesay sheekada filimkaan siweyn ayaa loo dhaweeyay wuxuuna gaaray guul dhex dhexaad ah.
Sidoo kalena Pukar wuxuu ka caawiyay Dixit inay u tartanto atirishada ugu wanaagsan oo ay shirkada Filmfare Awards bixiso.
Kadib xidigtaan calankeeda wuuba iska sii dhacay waxayna la timid filimo guul dareesteen sida Gaja Gamini (2000), Yeh Raaste Hain Pyaar Ke (2001) iyo Lajja (2001).
Dixit sanadii 2002 ayay soo rogaal celisay waxayna gaareen guulo wacan labadii filim oo ay SRK la sameesay.
Filimkeedii kowaad Hum Tumhare Hain Sanam guul dhex dhexaad ah ayuu gaaray balse filimkeedii labaad Devdas oo ay SRK iyo Aishwarya Rai la sameesay Hit-kii ugu weynaa sanadii 2002 ayuu noqday.
Devdas doorkii ay ka qaadatay Madhuri wuxuu ka caawiyay inay ku hesho abaal marinta atirisho caawiso mida ugu wanaagsan oo ay shirkada Filmfare Awards bixiso.
Madhuri waxay si rasmi ah shaaca kaga qaaday inay Bollywood-ka si ku meel ah uga fariisatay sidoo kalena ay xooga saari doonto daryeelida caruurteeda.
Madhuri Dixit Iyo Markii Ay Saaxada Dib Ugu Soo Laabatay 2007 Ilaa Haatan:
Kadib markii ay mudo 5-sano ah Bollywood-ka ka maqneyd Madhuri waxay sanadii 2007 la timid filimkii Aaja Nachle oo ay shirkada Yash Raj Films iska laheyd.
Inkastoo Madhuri ay soo laabatay hadana filimkaan wax cusub masoo kordhinin madaama uu sheeko ahaan iyo ganacsi ahaan guul dareestay.
Madhuri oo aan hami badan u heynin Bollywood-ka madaama ay noqotay hooyo mashquulkeeda badan yahay waxay sanadii 2014 hogaamiye ka noqotay filimkii Dedh Ishqiya oo ay la sameesay Naseeruddin Shah iyo Arshad Warsi.
Inkastoo Dedh Ishqiya sheeko ahaan aad looga helay hadana filimkan ganacsi ahaan wuxuu noqday mid guul dareestay.
Sidoo kalena Madhuri sanadii 2014 waxay la timid filimkii Gulaab Gang oo ay Juhi Chawla isla jileen inkastoo qaab jiliin wacan lagu soo bandhigay filimkaan hadana daadka ayaa noqday waana mid guul dareestay.
Madhuri waxaa sanadkaan uso bixi doono filmka Marathi-ga ah ee Bucket List kaaso uu Ranbir Kapoor muuqaal marti ah kulahaan doono sido kale filmka Total Dhamal ee Bollywoodka ah ayaa sanadkaan usoo bixi doono waana mashruuc ay Anil Kapoor mudo sanado kadib ah kula midoowi doonto halka AJay Devgan hogaamiye ka yahay.
Ugu dambeyn Dixti sanadka dambe waxay wax ka jili doonta filmak Kalank ee jilaasha badan la isugu keenay ayadoo 21 sano kadib Sanjay Dutt shaashada la wadaagi doonto..
Madhuri Dixit Waa Gabar Dhanka Dance-ga Looga Haray:
Xidigtaan ma jirto atirisho dhanka Dance-ga ku gaarto waxaana inta badan loogu yeeraa “Dhak Dhak Girl”.
Heesaha hirgaleen oo ay Madhuri kasoo muuqatay sidoo kalena Dance heer sare kusoo bandhigtay waxaa ka mid ah: Dhak Dhak Karne Lag (Beta), “Ek Do Teen” (from Tezaab), “Humko Aaj Kal Hai” (from Sailaab), “Bada Dukh Deenha” (from Ram Lakhan), “Chane Ke Khet Mein” (from Anjaam), “Didi Tera Devar Deewana” (from Hum Aapke Hain Koun..!), “Choli Ke Peechhe” (from Khalnayak), “Akhiyan Milaun” (from Raja), “Mera Piya Ghar Aaya” (from Yaraana), “Kay Sera Sera” (from Pukar), “Badi Mushkil” (from Lajja), “Maar Daala” (from Devdas), “Aaja Nachle” (from Aaja Nachle), iyo “Ghagra” (from Yeh Jawaani Hai Deewani).
Madhuri Dixit Iyo Nolosheeda Gaarka Ah:
Dixit waxaa la sheegay in bilawgii 90-kii ay jeceyl la wadaagtay Sanjay Dutt waxayna isku barteen filimkii Saajan (1991) intii ay wada duubayeen.
Balse Madhuri ayaa jeceyka kaga baxday Sanjay Dutt kadib markii sanadii 1993 xidigtan hub sharci daro ah lagu helay sidoo kalena 5-sano oo xarig ah lagu xukumay!
17 bishii October sanadii 1999 Madhuri Dixit waxay si rasmi ah ula aqal gashay Dr. Shriram Madhav Nene, waa dhaqtar Hindi ah balse xaruntiisa tahay magaalada Los Angeles ee dalka Mareekanka.
Madhuri iyo seygeeda Dr. Shriram Madhav Nene, waxaa u joogaan labo wiil oo kala ah Arin oo dhashay Maarso sanadii 2003 iyo Rayaan oo dhashay Maarso sanadii 2006.
Waxaa Aqrisay 1,402